किन ढाँटे श्रम मन्त्रीले संसदीय समितिलाई | Tungoon
किन ढाँटे श्रम मन्त्रीले संसदीय समितिलाई
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संसदको उद्योग, बाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिलाई घरेलु कामदारको झुटो विवरण बुझाएको स्रोतको दावी छ । घरेलु कामदार(हाउसमेड) खाडी मुलुकमा पठाउनका लागि ३ बर्षअघि १८ वटा म्यानपावरले बैदेशिक रोजगार विभागको बैंकखातामा २५ लाखका दरले धरौटी राखेका थिए । बैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावरहरूलाई घरेलु कामदार पठाउन अनुमति नदिएको र धरौटी रकम समेत फिर्ता नगरेकोबारेमा उद्योग बाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता समितिले मन्त्रालयलाई सोधेको थियो ।
मन्त्रालयले २०७५ माघ ३ मा समितिलाई लेखेको पत्रमा म्यानपावरहरूले धरौटी रकम फिर्ता लगिसकेको उल्लेख गरेको छ । तर घरेलु कामदार पठाउन अनुमतिका लागि धरौटी राखेका १८ म्यानपावरले अहिलेसम्म उक्त रकम फिर्ता नलगेको एक म्यानपावर संचालकले बताएका छन् । हामीले ३ बर्षअघि घरेलु कामदार पठाउनका लागि एक म्यानपावर बराबर २५ लाख धरौटी राखेका थियौं, तर अहिलेसम्म विभागले न कामदार पठाउन अनुमति दियो न त धरौटी नै फिर्ता गरेको छ । मन्त्रालयले धरौटी फिर्ता लगिसकेको भनेर झुटो विवरण समितिलाई दिएको सुनेर हामी आश्चर्यमा परेका छौं । हामीले रकम फिर्ता लगेका छैनौं, विभागको नामको बैंकको खाता नम्बरमा जम्मा गरेको भौचर हामीसँग सुरक्षित छ ।’
श्रम मन्त्रालयले ब्यवसायीले फिर्ता नलगेको रकम लगेको जानकारी समितिलाई दिएको छ । विभागको पत्रमा उल्लेख छ–‘बैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका २०७२ को दफा ५ बमोजिम घरेलु कामदार पठाउन सूचीकृत संस्थाहरूले मात्र घरेलु कामदार पठाउनसक्ने ब्यवस्था रहेको छ । यस्ता संस्थाहरू विगतमा सक्रिय रहेतापनि खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन निषेध गरिएपछि निस्क्रिय भई र धरौटी रकम समेत फिर्ता लिई रद्द भएको देखिन्छ ।’
घरेलु कामदार पठाउनका लागि २५ लाख धरौटी राखेर अहिलेसम्म फिर्ता नलाने म्यानपावरहरूमा म्यानपावर लिंक, फ्रन्टलाइन म्यानपावर, स्यारोन म्यानपावर, भैरव म्यानपावर, यूरोक्रस म्यानपावर, वल्र्ड भिजन म्यानपावर, गौतम म्यानपावर छन् ।
त्यसैगरी नास म्यानपावर, माउन्टेन ग्रुप, काठमाण्डु इन्टरनेशनल, कन्चन म्यानपावर, वल्र्डवाइड म्यानपावर, गल्फ लिंक, इन्टरनेशनल टे«ड लिंक, अग्नी म्यानपावर, क्राउन म्यानपावर, हिमअरब म्यानपावर र स्काई ओभरसिज म्यानपावरले राखेको धरौटी पनि फिर्ता लगेका छैनन् । तर श्रम मन्त्रालयले संसदीय समितिलाई म्यानपावरहरूले धरौटी फिर्ता लगिसकेको भनेर झुटो विवरण दिएको छ ।
खाडी राष्ट्रमा घरेलु कामदार (महिला) पठाउँदा यौनहिंसा जस्ता विभिन्न खाले हिंसाको शिकार भएर फर्किने क्रम बढेपछि सरकारले रोक लगाएको थियो । तर नेपालबाट रोक लगाए पनि दलालहरूले भारतको दिल्ली हुँदै खाडी राष्ट्रमा हाउसमेड पठाउन थाले । दिल्लीमा त्यहाँको राज्य महिला आयोगले खाडी राष्ट्रमा हाउसमेडमा लान लागेका महिलाको ठूलो संख्यालाई दलालहरूको कब्जाबाट मुक्त गरी उद्दार गरेको धेरै समय भएको छैन ।
दिल्लीबाट खाडी राष्ट्रमात्र होइन, प्रतिबन्धित मुलुकमा समेत भिजिट भिसामा दलालहरूले महिला कामदार पठाउने र अलपत्र परेपछि नेपालको त्रिभुवन विमानस्थलबाट फर्कने गरेका छन् । तर श्रम मन्त्रालयले भने घरेलु कामदार दलालहरूमार्फत् भारत हुँदै खाडी राष्ट्रमा गइरहेको कुरालाई हल्का रुपमा लिएको छ । संसदीय समितिलाई दिएको जवाफमा श्रममन्त्रालयले लेखेको छ–‘अधिकांश कामदारहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै गएको स्थिति छ । न्यून संख्याका केही कामदारहरू हवाई टिकट नपाइएको कारण जनाई विदेशी विमानस्थल समेत प्रयोग गरी गएको पाइएको छ ।’
Previousनारायणकाजीका कारण प्रधानमन्त्री धेरै रुष्ट शिक्षा मन्त्रीको पद धरापमा ?
Nextयी हुन मन्त्रीलाई नटेर्ने भ्रष्टलाई काखी च्याप्ने सचिव !
आन्दोलनकारी चिकित्सकलाई कारबाहीको सिफारिस
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाद्वारा शिवरात्रिमा पशुपति क्षेत्रमा सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय